XOG: Maxkamadda ICJ wey diiday dalabkii Kenya, waxayna amartay go’aamo cusub
NAIROBI(P-TIMES) – Maxkamadda Cadaaladda Aduunka ayaa diiday dalab uga yimi Kenya oo ay ku dalbanaysay in 12 bilood dib loo dhigo qaraarka dhageysiga dacwadda u dhaxaysa Soomaaliya & Kenya ee xagga Badda oo horey qorshaheeda loo qabtay 4ta bisha November ee nagu soo wajahan.
Kenya ayaa dalabkeeda la diiday gabi ahaanba, waxaana lagu amray in ay sida ugu dhaqsaha badan labada dalba uga soo qeybgalaan dhageysiga dacwadda oo dhici doonta 4ta bisha November, waxaana la go’aamiyey in dhageysigu uu xiligaas noqdo.
Wargeyska The Star ee kasoo baxa magaalada Nairobi ayaa baahiyey warkan, isagoo sheegay in uu kasoo xigtay xubno katirsan Wasaaradda Arrimaha dibada Kenya oo lagu amray in ay u diyaar garoobaan dhageysiga dacwaddan, sidaas oo kale Qareenada Kenya ayaa hadda is diyaarinaya.
Talaabada ay qaaday Maxkamadda Cadaaladda Aduunka ayaa ka dambeysay markii ay dhawaan latashi ugu yeertay labada dal ee Soomaaliya & Kenya, waxaana Soomaalidu ay diideen in ay dib u dhigtaan dacwaddan.
Go’aanka ICJ kasoo baxay ayaa ah mid ay soo dhaweynayaan Soomaalida, maadaama Kenya ay mudo dheer doonaysay in dib loo dhigo kiiskan, balse Maxkamaddu ay dhawaan u ogolaatay diyaar garow dhan labo bilood gudahood.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa dadaal badan galisay sidii meelmar looga dhigi lahaa in qaraarka dhageysigiisa la qaado 4ta November oo aan waxba dib loo dhigin, waana mida keentay in ay hadda ICJ si rasmi ah u shaaciso markale.